प्रधामन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न, उहाँकै पक्षमा बहुमत छः गोकुल बाँस्कोटा | Ratopati
प्रधामन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न, उहाँकै पक्षमा बहुमत छः गोकुल बाँस्कोटा
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeअसार १८, २०७७ chat_bubble_outline2
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने मागमा कुनै तर्क नभएको बताएका छन् ।
उनले सरकारले गर्ने काम निरन्तर गरिरहेकाले पार्टीमा राजीनामाको माग उठनुमा कुनै तर्क नभएको बताए ।
नेता बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने र नदिने पनि बताए ।
उनले भने, ‘खास गरीकन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ दुईवटै पद छोडनुपर्छ भन्ने कुरा हो, यो चाहिं जम्माजम्मीमा काम नलाग्ने कुतर्क हो । यो त नेताहरुलाई पनि थाहा छ । त्यसैले जे मिलेको छैन उहाँहरु छलफल गर्नुहुन्छ । पर्सी बैठक हुने हो । भोलि उहाँहरु दुईवटा अध्यक्ष लामो छलफल गर्नुहुन्छ, होला । संवादबाटै निकास खोज्ने हो । त्यस्तो धेरै पेचिलो छैन ।’
बाँस्कोटाले नेकपासित विभाजन हुने, एकतालाई बलियो बनाउने वा नेताहरुबीच कम्प्रमाइज हुने बाहेकको विकल्प नभएको पनिबताए । उनले भने, ‘नेकपासित के विकल्प छन् ? या त विभाजन हुन प¥यो या त एकता गर्नप¥यो या त कम्प्रमाइज गर्नप¥यो । यो भन्दा बाँकी त कुनै विकल्प नेकपासित छैन नि । सबैलाई थाहा छ, नेकपा संक्रमणकालमा चलिरहेको छ । त्यसैले यस्तो बेलामा दुईवटा स्कुलिङको द्वन्द्वपनि देखिन्छ । त्यो कुरा नेताहरुलाई थाहा छ ।’
उनले बैठकमा राजीनामाको कुरा उठ्नु स्वभाविक भएको बताए । लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा सबैले राख्न सक्ने तर अहिले सम्म लक्ष्मण रेखा कसैले ननाघेको बताए । उनले भने, ‘बैठक बस्छन् आफ्ना कुरा राख्छन्, आफ्नो दृष्टिकोण राख्छन् तर लक्ष्मण रेखा कसैले पनि नाघेको मैले देखेको छैन । नाघ्ने कोसिस पनि कसैले गर्दैन किनभने एकता गर्दा नै यसका पेचिला पक्ष र यसका उज्ज्वल पक्षहरुको बारेमा जानकार नै छन् ।’
उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको पदबाट राजीनामा माग गर्ने एउटा कुरा भएको तर दिने या नदिने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा भएको बताए । उनले अझैपनि बहुमत प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा रहेकाले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नरहेको दावी गरे ।
उनले यक्ति हेरेर सिद्धान्तहरुको निरुपण वा प्रतिवादन गर्न नहुने समेत बताए । प्रधानमन्त्री पाँच वर्षलाई निर्वाचित भएको र दुईवटा अध्यक्ष महाधिवेशन नहुँदा सम्मलाई अध्यक्ष भएकाले एक व्यक्ति एक पद लागू नहुने पनि उनको तर्क छ ।
उनले अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै ठूलो चौतर्फी आक्रमण पनि नभएको बताए ।
नेता बाँस्कोटाले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत जानकारी रहेको दावी गरे ।
July 3, 2020, 12:11 p.m. Min Bahadur Nepalu
Kukgyat vrastachari boleko kati nasuhayeko
July 3, 2020, 11:42 a.m. ups
yasta netaharuo sath bhayosa le garda nai pradhanmantri ani sarkar ko sakh gireko ho.
कोरोना संक्रमितहरुको उपचार गर्ने दायित्वबाट राज्य पछि हट्योः २१ वामपन्थी दल
प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय
यस्ता छन् असोज २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
६० वर्ष ननाघेका एकल महिलालाई मासिक २ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता
क्लिन फिडको संघारमा मन्त्रीलाई उजुरीः आइपी टिभी र एप्लिकेसनका गैरकानुनी प्रसारण रोक्न माग
हारालुछ भयो खाद्य संस्थानका खसीबोका, भीडबाट ग्राहक कराए- ‘घरमा खसी लाने कि कोरोना ?’(भिडियो)